Soosaarka tuubada muraayada Shiinaha iyo Warshad | Yan Tuo
Kaarboonka Fiber Kaarboonka
Usheeda dhexe Balaadhinta Hawada Carbon Fiber
Rullaluistemadka Fiber Kaarboon
Xaashida Kaarboonka Fiber / plate
Meegaarka Shatiga Liisanka Kaarboon Kaarboon
Carwada Caalamiga ah
Qodobbada Xanuunka Warshadaha iyo Faa'iidooyinka Wax soo saarka
Wax soosaarka maaddada Fibbaarigga waxaa lagu mideeyaa adkaynta maaddada maaddada 'fiber' iyo cusbi heerkulka sare leh. Cufnaanteedu waa kaliya rubuc ka mid ah kan birta ah, iyo saddex-meelood laba meelood aluminium.
Waxaan la kulmi karnaa shuruudaha macaamiisha ee dhererka iyo dhexroorka tuubooyinka fiilooyinka kaarboon. Dhererku wuxuu noqon karaa ilaa toban mitir dhexroorkuna wuxuu noqon karaa ilaa 500mm. Kadibna habka waxsoosaarka horumarsan iyo tayada adag, waxaan soo saari karnaa alaab tayo sare leh.
Guryaha profile FRP
1. Iska caabinta daxalka:
Wax soo saarku waa u adkaysiga u nuglaanshaha gaaska iyo dareeraha asiidhyada, alkalis, cusbo, iyo dareeraha dabiiciga si ay uga fogaadaan dhibaatada birta daxaleysa iyo alwaax qurmay.
2. Miisaan fudud iyo xoog sare:
Wax soosaarka maaddada Fibbaarigga waxaa lagu mideeyaa adkaynta maaddada maaddada 'fiber' iyo cusbi heerkulka sare leh. Cufnaanteedu waa kaliya rubuc ka mid ah kan birta ah, iyo saddex-meelood laba meelood aluminium. Laakiin xooggeedu waa toban jibaar kan PVC, wuxuu ka sarreeyaa alaabada aluminium oo wuxuu gaarayaa heerka birta kaarboonka caadiga ah. Miisaankiisa fudud awgood, alaabtu waxay u baahan yihiin taageero aasaasi ka yar waxayna leeyihiin astaamaha rakibidda fudud iyo kharashyada yar.
3. Caawinta Dib-u-dhaca:
Isugeynta guud ee oksijiin ee wax soosaarka maroogaha ee caadiga ahi wuxuu ka sarreeyaa 32 (sida waafaqsan GB8924). Naqshad ahaan, tusmada fidinta ololka ee alaabada ethylene-ka ee sii kordheysa ayaa ka hooseysa 10, taas oo buuxineysa shuruudaha iska caabinta dabka injineernimada ee badbaadada.
4. U Adkaysiga Shilka iyo Adkaysiga Daalka:
Waxyaalaha maaddada Fiberglass-ka ayaa iska caabin kara isku dhaca isla markaana xajiya qaabka asalka ah ka dib markii laaban laaban si loogu isticmaalo gu'ga.
5. Da’da iska caabin ah:
Cimriga dheer ee caadiga ahi waa in ka badan 20 sano. Natiijada cilmi baarista waxay muujineysaa in xooga uu wali sii heyn doono in ka badan 85% 20 sano ka dib soo-gaadhista jawiga.
Muuqaal wanaagsan iyo Dayactir Fudud:
Midabaynta midabbada alaabada fiberglass-ka ayaa lagu qasi jiray cusbada si midabku u noqdo mid dhalaalaya oo ay adagtahay inuu libdho. Rinjiyeyn looma baahna dusha sare ee nadiifta ka dib maydhashada.
Codsiga tuubada FRP
waxay buuxin kartaa shuruudaha gaarka ah ee isticmaalayaasha, waxaana loo isticmaali karaa aagga carrada jilicsan ee dhoobada ah, aagagga burburka oo burburi kara, aagga harooyinka iyo aagga dhexdhexaadka ah ee daxalka u leh kiimikada, iwm. Waxay qaadataa iskuxidhka barkin boodhka oo dhammaystiran waxayna ka kooban tahay dariiqyo xariijin tuubbo badan. Waxay sidoo kale noqon kartaa tuubbada ilaalisa marka xariggu ka gudbo buundada ama webiyada.
1. Mashruuca dhismaha shabakada korontada iyo dayactirka.
2. Mashruuca dayactirka dawlada hoose ee magaalada.
3. Dhismaha garoonka diyaaradaha.
4. Beerta warshadaha, dhismaha tuulada.
5. Wadada taraafikada iyo dhismaha injineernimada buundada.
Hore: OEM Kalluumeysiga Kalluumeysiga
Cinwaanka: 80-1 wadada Dongkuang, magaalada Zhangcun, Degmada Huancui, Gobolka Shandong, Shiinaha